Dr. Tint Swe's Writings: Our Language Root မြန်မာစာသည် ခါး၏
မေးခွန်း = လူမျိုးတမျိုးရဲ့ အမျိုးသားရေးဝိသေသထဲမှာ ဘာသာစာကို မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတတ်ခြင်းပါပါတယ်။ ဘယ်လို ကွဲသလဲဆိုတာ ခွဲခြမ်းပေးပါဦး။
တ နဲ့ တစ် ပုဒ်ရေ တရာကျော်ပြီ။ ဖတ်ဖူးသူတွေကို အားနာရတယ်။ မေးခွန်းထဲက တစ်ကိုတော့ ကျွန်တော့်ပို့စ်မှာ သုံးမှာ ဖြစ်လို့ ပြင်ပါတယ်။ ဆောရီး။
Sumerian ဆူမားရီးယန်ဘာသာစကားဟာ ကမ္ဘာမှာ ရှေးအကျဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဘီစီ ၃ဝဝဝ မတိုင်မီကတည်းက ရေးသားခဲ့တယ်။ ကနေ့အထိသုံးစွဲနေတဲ့ ကမ္ဘာမှာရှေးအကျဆုံးဘာသာစကား (၁ဝ) မျိုးရှိတယ်။
1. Hebrew ဟီဘရူး၊
2. Basque ဘက်စ်၊
3. Tamil တမီးလ်၊
4. Lithuanian လစ်သူနီးယန်၊
5. Farsi ဖါရ်ဆီ၊
6. Icelandic အိုက်စလန်၊
7. Macedonian မက်ဆီဒိုးနီးယန်း၊
8. Finnish ဖင်းနစ်ရှ်၊
9. Georgian ဂျော်ဂျီယန်၊
10. Irish Gaelic အိုင်းရစ်ရှ် ဂေးလစ်၊
ခေတ်ဟောင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို အင်ဂလို-ဆက်ဆွန်လို့ခေါ်တယ်။ ၅ ရာစုလောက်ကစတယ်။ နော်မန်တွေက သိမ်းယူတော့ အင်ဂလို-နော်မန်ဘာသာစကားကို အထက်တန်းကျသူတွေက သုံးလာတယ်။ ခေတ်ဟောင်းအင်္ဂလိပ်စကား ရပ်စဲသွားတယ်။ အလယ်ခေတ်အင်္ဂလိပ်စကားဟာ အနောက်ဂျာမန်စကားနဲ့ ဆက်နေတယ်။ နှစ် ၁၄ဝဝ ကျော်အတွင်း တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်။ ကိုလိုနီနယ်တွေသိမ်းယူနိုင်ရာကနေ အင်္ဂလိပ်စကားလည်း ကျယ်ပြန့်လာတယ်။ အက္ခရာတွေရော သဒ္ဒါပါ ပြောင်းလာတယ်။
ကမ္ဘာမှာ လူဦးရေအများဆုံးကသုံးတဲ့ ဘာသာစကားတွေရှိတယ်။
၁။ တရုပ် = ၉၃၇၁၃၂ဝဝ
၂။ စပိန် = ၃၃၂ဝဝဝဝဝဝ
၃။ အင်္ဂလိပ် = ၃၂၂ဝဝဝဝဝဝ
၄။ ဘင်္ဂါလီ = ၁၈၉ဝဝဝဝဝဝ
၅။ ဟင်ဒီ = ၁၈၂ဝဝဝဝဝဝ
၆။ အာရတ် = ၁၇၄၉၅ဝဝဝဝ
၇။ ပေါ်တူကီ = ၁၇ဝဝဝဝဝဝဝ
၈။ ရုရှား = ၁၇ဝဝဝဝဝဝဝ
၉။ ဂျပန် = ၁၂၅ဝဝဝဝဝဝ
၁ဝ။ ဂျာမန် = ၉၈ဝဝဝဝဝဝ
ကမ္ဘာမှာ လွှမ်းမိုးမှုအများဆုံးဘာသာစကား (၅) မျိုးရှိတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာ တရားဝင်သုံးနိုင်ငံပေါင်း ၇၆ နိုင်ငံနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၅ နိုင်ငံ ရှိတယ်။ ပြင်သစ်စာ တရားဝင်သုံးနိုင်ငံပေါင်း ၆၂ နိုင်ငံ။ အာရတ်စာ တရားဝင်သုံးနိုင်ငံပေါင်း ၂၈ နိုင်ငံနဲ့ စပိန်စာ တရားဝင်သုံးနိုင်ငံပေါင်း ၂၄ နိုင်ငံရှိတယ်။
မြန်မာဘာသာစကားဟာလည်း သက်တမ်းရှည်ပြီ။ စောစောပိုင်းကာလတွေမှ အိန္ဒိယ၊ သီရိလင်္ကာနဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေရှိခဲ့လို့ ပင်မမြန်မာစကားထဲမှာ ရောနှောမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ပါဠိနဲ့ သက္ကတပါရောနှောလာတယ်။ မြန်မာဘာသာစကားဟာ တိဘက်တိုဘာမင်း အုပ်စုထဲကလို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ အဲတာက ဆိုင်နို-တိဘက် ဘာသာစကားမိသားစုထဲကဖြစ်တယ်။ သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ၁၁ဝဝဝ ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ၁၁ ရာစုထဲမှာရေးသားခဲ့တာကို မှတ်တမ်းကောင်းကောင်း ရရှိထားတယ်။ ပျူဘာသာစကားက ၉ ရာစုကတည်းက ဖြစ်တယ်။
ကနေ့ မြန်မာဘာသာစကားကို ပြောဆို ရေးသားနေသူပေါင်း ၅၂ သန်းလို့ခန့်မှန်းပါတယ်။ ပြည်တွင်းထဲမှာသာမက ပြည်ပ နိုင်ငံတွေမှာလည်း သိသာတဲ့အရေအတွက်ရှိတယ်။ ကိုယ်စာကိုယ် ထိန်းကြရတယ်။ တိုးတက်စည်ပင်အောင် လုပ်ရတယ်။ ပွါးများကျယ်ပြန့်အောင်လည်း ကိုယ်တိုင်သာလုပ်ရပါတယ်။
တမာ ခွေးတောက်၊ မြစ်လျှောက်ရောယှက်၊ တူနှောဖက်က။ သရက်ချိုမြ ဗန္ဓရလျှင်၊ ကွယ်ပအပြီး၊ အခါးသီး၏။ မြန်မာစာမှာလည်း ခါးတဲ့အမြစ်တွယ်နေတာ နှစ်တွေကြာလို့ သတ်ပုံမှန်ကို တင်ပြတာကို အမှန်လို့ မထင်ကြတော့ပါ။ စိတ်မကောင်းကြီးစွာ ဖြစ်ရပါတယ်။